Ny lahatsoratr'i Lindsay Duran momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Lindsay Duran
Lindsay Duran no talen'ny marketing amin'ny Zilliant, izay andraikiny amin'ny fanafainganana ny paikady fitomboana, ny famokarana ny fangatahana, ny varotra vokatra, ny fifandraisana amin'ny orinasa, ny fahazoana mivarotra ary ny fametrahana ny tsena. Veteran amin'ny varotra sy ny marketing, Duran dia niara-niasa mivantana tamin'ireo orinasa B2B hamantatra sy hamaha ny vidiny, ny varotra ary ny fanamby tsy manam-paharoa.
Ny hoavin'ny varotra B2B: ekipa mifangaro ao anatiny sy ivelany
Alatsinainy, Aogositra 10, 2020 Alatsinainy, Aogositra 10, 2020 Lindsay Duran
Ny areti-mandoza COVID-19 dia nametraka ny vokatry ny tsimok'aretina manerana ny tontolon'ny B2B, angamba manodidina ny fomba fanaovana transakta. Mazava ho azy, ny fiatraikany amin'ny fividianana mpanjifa dia tena goavana, fa ahoana ny amin'ny orinasa amin'ny orinasa? Araka ny The B2B Future Shopper Report 2020, 20% monja amin'ireo mpanjifa no mividy mivantana amin'ireo solo-barotra, mihena amin'ny 56% amin'ny taona teo aloha. Mazava ho azy fa manan-danja ny fitaoman'ny orinasa Amazon, nefa ny 45% amin'ny valinteny fanadihadiana dia nitatitra fa mividy